rectangular Connectors - header, Receptacles, အမျိ - အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး | Infinite-Electronic.hk
နေအိမ်ထုတ်ကုန်များconnectors, Interconnectionrectangular Connectors - header, Receptacles, အမျိ
P.C. တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် ဘုတ်အဖွဲ့အဆင့် Interconnection ။ Samtec မိုက်ခရိုအစေးဘုတ်အဖွဲ့-to-ဘုတ်အဖွဲ့စနစ်များ (.100 ပေါ်တွင် ",2မီလီမီတာ, .050", 1 မီလီမီတာ, .8 မီလီမ...အသေးစိတ်
SS-101-G-2 Samtec, Inc. ဖေါ်ပြချက်:CONN RCPT .100" 1POS GOLD T/H
FLE-113-01-G-DV-A-P Samtec, Inc. ဖေါ်ပြချက်:CONN SKT 1.27MM 26POS DUAL SMD
ESW-110-44-L-D Samtec, Inc. ဖေါ်ပြချက်:ELEVATED SOCKET STRIPS
SS-104-TT-2 Samtec, Inc. ဖေါ်ပြချက်:CONN RCPT .100" 4POS TIN T/H
FX30B-2S-3.81DSA Hirose ဖေါ်ပြချက်:CONN RECEPT 2POS PCB VERT
HIF6B-20DA-1.27DS(71) Hirose ဖေါ်ပြချက်:CONN HOUSING 20POS 1.27MM
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71) Hirose ဖေါ်ပြချက်:CONN REC 20 POS 25.4MM VERT
DF11CZ-8DS-2V(22) Hirose ဖေါ်ပြချက်:CONN SOCKET 8POS
5-102766-4 Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:CONN RCPT 60POS/52CONT .100 GOLD
350644-1 Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:CONN HEADER SOCKT VERT 15POS TIN
1-215297-2 Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:CONN RCPT 12POS .100 VERT T/H
104196-5 Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:CONN RCPT 20POS R/A SOLDER T/H
71991-804HLF Amphenol FCI ဖေါ်ပြချက်:CONN RCPT 8POS .100 DL STR PCB
63453-148LF Amphenol FCI ဖေါ်ပြချက်:CONN RECEPT 48POS 2MM STR DL PCB
71991-315LF Amphenol FCI ဖေါ်ပြချက်:CONN RCPT 30POS .100 DL STR PCB
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT 2MM VRT DUAL ROW 18POS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 24294 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT 60POS/52CONT .100 GOLD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4688 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN HEADER SOCKT VERT 15POS TIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12755 pcs
ဖေါ်ပြချက်: PCB SKT, SOLDER TAIL 64 POLE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 17283 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT 12POS .100 VERT T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 37614 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT .100" 1POS GOLD T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 81698 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN SKT 1.27MM 26POS DUAL SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 18031 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RECEPT 2POS PCB VERT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 24517 pcs
ဖေါ်ပြချက်: STRIP SOCKET9PIN SOLDER TAIL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 50864 pcs
ဖေါ်ပြချက်: ELEVATED SOCKET STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 19434 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT .100" 4POS TIN T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 149557 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 2X17 POS DIL VERT SOCKET
ဖေါ်ပြချက်: 2MM SKT STRIPS
ဖေါ်ပြချက်: 2MM DOUBLE ROW SOCKET STRIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 15806 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RECEPT .100 SNGL STR 20POS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 27236 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 2MM SOCKET STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 61162 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT 40POS DUAL .100" GO
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 17396 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN HOUSING 20POS 1.27MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 18094 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RECEPT 20POS .050" SMT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 21283 pcs
ဖေါ်ပြချက်: .050" X .050
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 18811 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12545 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN REC 20 POS 25.4MM VERT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 28436 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT 20POS R/A SOLDER T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 18304 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT .100" 12POS GOLD PCB
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 40516 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT .100" 12POS DUAL TIN
ဖေါ်ပြချက်: CONN HEADER .050" 8POS DL SMD AU
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 73090 pcs
ဖေါ်ပြချက်: HEADER 32POS SOCKET R/A 2.54MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 40974 pcs
ဖေါ်ပြချက်: .050 MICRO STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 25843 pcs
ဖေါ်ပြချက်: .100 C.L. HORIZONTAL SMT SOCKET
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 36649 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT .100" 7POS SNGL GOLD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 39188 pcs
ဖေါ်ပြချက်: QUAD ROW SMT SOCKET
ဖေါ်ပြချက်: SOCKET SOLDER TAIL SINGLE ROW
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 68793 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT .100" 6POS SNGL GOLD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 38758 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 13762 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 20468 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 35517 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT .100" 10PS DL R/A GOLD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 20584 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER CUP SOCKET; .050" PITCH;
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12398 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN SOCKET 8POS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 72352 pcs
ဖေါ်ပြချက်: .050" MICRO STRIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 21646 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RECEPT 18POS 2MM PCB GOLD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 33740 pcs
ဖေါ်ပြချက်: VERTICAL MINI-POWER W/SIGNAL SOC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12641 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN SOCKET 4POS 2.54MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 46653 pcs
ဖေါ်ပြချက်: .100 TIGER BEAM SOCKET ASSEMBLY
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 43512 pcs